Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwikhompyuter yakho | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, Tutorials
I-WhatsApp iye yaba iqonga lonxibelelwano elisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphelaZombini zilungile kwaye zimbi. Ngalo lonke ixesha le nkonzo isiya ezantsi, baninzi abasebenzisi abaqala ukuqala kwakhona ii-smartphone zabo kwaye bazama kaninzi nokuba siyintoni na isizathu, ngaphandle kokukhathaza ukwenza uphando olulula kwi-Intanethi, apho sihlala sifumana impendulo ngokukhawuleza.
Ukusukela oko kwafika ezinye izicelo zemiyalezo ezinje ngeTelegram, isicelo abathe abasebenzisi abaninzi baqala ukusamkela ngezandla ezivulekileyo ngenxa yokuba isplatform yeplatform, uninzi lwabasebenzisi bayazibuza ukuba kutheni inkampani kaMark Zuckerberg ayizisi isicelo seekhompyuter. Endaweni yokuba isinika inkonzo yewebhu ebuhlungu. Apha sikubonisa indlela yokusebenzisa i-WhatsApp kwikhompyuter yakho.
Kwaye ndiyatsho ukuba le nkonzo yewebhu ibuhlungu kakhulu, ngenxa iyasinyanzela ewe okanye ewe ukuba sibe ne-smartphone yethu ngalo lonke ixesha, ngaphandle kokukwazi ukuyicima kwaye ulibale ngayo. Ngokuka-WhatsApp, oku kungenxa yokuba imiyalezo ayigcinwanga kwiiseva zayo (into uninzi lwethu oluthandabuzayo), yiyo loo nto i-smartphone kufuneka ihlale ikho ukuze ikwazi ukufumana incoko kuyo.
Kwaye nditsho ukuba uninzi lwethu luyathandabuza, kuba ngeTelegram, apho iincoko zikwakhowudi ezifihliweyo ukusuka kwinqanaba ukuya kwelinye, sinethuba lokulisebenzisa ngaphandle kokuba i-smartphone yethu isebenze nangaliphi na ixesha. Ukongeza, isinika isicelo kuwo onke amaqonga eselfowuni kunye nedesktop akhoyo namhlanje, into abasebenzisi abaninzi abanokuyithanda kwi-WhatsApp.
Kodwa ewe, ukuba ngaphambi kokuthengwa kwe-WhatsApp nguFacebook, umba wohlaziyo ushiye kunqweneleka, le ndlela yokusebenza ayitshintshanga, ke asinakuqhubeka nokucela amapere kwi-elm, kuba ayinakuze ikwazi ukubanika.
Okwangoku, i-WhatsApp iyafumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS, amaqonga amabini kuphela akhoyo kwintengiso yeefoni namhlanje. Isicelo ngasinye sisivumela ukuba sisebenzise i-WhatsApp kwikhompyuter, kodwa ngelishwa, indlela yokwenza oko yahlukile. Apha sikubonisa ukuba singenza njani Sebenzisa i-WhatsApp kwikhompyuter ukuba sine-smartphone ye-Android okanye i-iPhone.
1 Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwikhompyuter yakho nge-Android
2 Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwikhompyuter yakho nge-iPhone
3 Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwi-iPad
4 Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwithebhulethi ye-Android
5 Iingcebiso zokuqwalaselwa
6 Ungena njani kwiWebhu yeWhatsApp
Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwikhompyuter yakho nge-Android
Ngaphambi kokwenza nantoni na, kufuneka singene kwiwebhusayithi: web.whatsapp.com. Kwelo phepha, liza kusibonisa indlela ekufuneka siyilandele ukuze sikwazi ukusebenzisa i-WhatsApp kwikhompyuter, indlela esichaza apha ngezantsi:
Nje ukuba sivule isicelo kufuneka sivule isicelo semiyalezo ye-WhatsApp kwaye ucofe kuyo Cwangcisa.
Kwiwindow elandelayo, cofa apha Whatsapp Web / Desktop.
Emva koko, kuya kufuneka sibhekise ikhamera yesicelo Ikhowudi yeQR eboniswe kwiscreen kwikhompyuter yethu. Sichitha imizuzwana embalwa, inkonzo yewebhu kaWhatsApp iza kuvulwa ukusuka apho siya kuba nakho ukulandela iincoko zethu kakuhle kwikhompyuter yethu.
Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwikhompyuter yakho nge-iPhone
Kuqala nangaphambi kokwenza enye into, kufuneka singene kwiwebhusayithi: web.whatsapp.com. Kwelo phepha liza kusibonisa indlela ekufuneka siyilandele ukuze sisebenzise i-WhatsApp kwikhompyuter, indlela esichaza ngayo kula manqaku alandelayo.
Okwesibini, kufuneka sivule isicelo semiyalezo ye-WhatsApp kwaye ucofe kuyo Cwangcisa.
Kwiwindow elandelayo, kufuneka sicinezele Whatsapp Web / Desktop.
Okwalo mzuzu, kufuneka sikhombe ikhamera yesicelo Ikhowudi yeQR eboniswe kwiscreen kwikhompyuter yethu. Sichitha imizuzwana embalwa, inkonzo yewebhu kaWhatsApp iza kuvulwa kwaye siya kuba nakho ukuqhubeka neengxoxo zethu ngekhompyuter, ngelixa i-smartphone yethu ihlawulisa.
Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwi-iPad
Nangona kungekho sicelo sisemthethweni se-iPad, singasebenzisa ithebhulethi yeApple ngokungathi yikhompyuter enokwazi ukuyenza sebenzisa WhatsApp ngaphandle kwengxaki.
Okokuqala, kufuneka sivule iwebhu ngesikhangeli seSafari web.whatsapp.com
Le webhusayithi ayizukusinika ulwazi olufanayo esinokulufumana kwinguqulelo yedesktop, ke kufuneka sicele isikhangeli ukuba sisibonise Inguqulelo yedesktop. Ukwenza oku kuya kufuneka ucofe iqhosha lokwabelana kwaye ukhethe uguqulelo lweDesktop.
Xa u-odola uhlobo lwedesktop, iwebhu iya kuboniswa ngokungathi siphambi kwekhompyuter. Okulandelayo, kufuneka silandele amanyathelo afanayo nakweli candelo lidlulileyo, kodwa endaweni yokuzisa ikhamera ye-iPhone kufutshane nokubekwa kweliso kwikhompyuter yethu, kufuneka siyisondeze kwiscreen se-iPad yethu apho kuboniswa khona ikhowudi yeQR.
Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwithebhulethi ye-Android
Inkqubo yokusebenzisa i-WhatsApp kwithebhulethi ye-Android iyafana naleyo kufuneka siyenze kwi-iPad, kodwa ngokungafaniyo ne-iOS, apho singacela khona inguqulelo yewebhu kanye xa iphepha libonisiwe, kwi-Android, kufuneka singene useto lwebrowser ukujonga ibhokisi Inguqulelo yekhompyuter.
Nje ukuba ingxelo yedesktop iboniswe, kufuneka qhubeka ngokwesiphelo esinaso, nokuba yi-iPhone okanye nayiphi na i-terminal elawulwa yi-Android njengoko sikubonisile kumacandelo angaphambili.
Ngokuzenzekelayo, ngalo lonke ixesha sisebenzisa i-WhatApp inkonzo yeWebhu, iseshoni ihlala iqale de siyivale Ngokwam, ngale ndlela, akukho mfuneko yokuba ukuba sifuna ukusebenzisa le nkonzo yonke imihla, kufuneka siyenze le nkqubo.
Gcina ukhumbula, ukuba inokuba yingxaki ukuba nabaphi na kwizalamane zethu bayayifumana le dilesi, i-WhatsApp yethu iya kulayishwa ukuze ibe yingxaki ngokuxhomekeke kwilungu losapho eliyenzayo kunye nomxholo esihlala siwuphatha.
Ukuba iqela lethu lahlukile iphasiwedi ekhuselweyo yomsebenzisi akhawunti, akufuneki siphume nangaliphi na ixesha. Kodwa ukuba oku akunjalo kwaye onke amalungu osapho angena kwikhompyuter efanayo, kungcono ukuba uphume ngalo lonke ixesha sigqiba ukusebenzisa le nkonzo.
Ungena njani kwiWebhu yeWhatsApp
Ukuphuma kwisikhangeli sethu, inkqubo iyafana, nokuba ikwi-smartphone ye-Android okanye kwi-iPhone. Kufuneka nje ucofe IWebhu yeWhatsApp / i-Desktop, Iyafumaneka kukhetho loqwalaselo.
Ukuba iseshoni ivuliwe kwikhompyuter yethu, iya kuboniswa kweli candelo endaweni yamanyathelo ekufuneka elandelwe ukusebenzisa iiseshoni esivulekileyo kuzo, nokuba kukwikhompyuter okanye kwiitafile. Ukuphuma, kufuneka ucofe nje Vala zonke iiseshoni. Okwalo mzuzu, ukuba siphambi kwekhompyuter yethu, siza kubona ukuba incoko iyanyamalala njani kwaye iphepha lokumiselwa kweWhatsApp liza kuphinda livele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwikhompyuter yakho
Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwikhompyuter ngaphandle kwe-Android nangaphandle kwe-iPad?
Uyifomatha njani i-iPhone kwaye uyiyeke intsha ngaphandle kwebhokisi
Uzijonga njani iifayile ezifihliweyo